Umatshini wokumakisha weeBhokisi eziQinisekayo abavelisi kunye nabaxhasi - Umatshini wokumakisha weBhokisi eQinisekileyo weChina
Umatshini webhokisi yesipho, ibhokisi yokupakisha, iibhokisi ezenziwe ngomatshini izixhobo zelayini, ezilahlwayo ziyakuqonda ukusongeka okwenziweyo, indlebe esongiweyo, ukususwa kwamaqamza kunye nokubumba kunye nokusonga kunye nokuqhubeka kwemisebenzi, kungagcina ixesha lol kunye nokufakelwa, ukuphucula imveliso isivuno sivelisa imveliso esiyikhethileyo yokuvelisa ibhokisi yokupakisha kwishishini.
Zenzekelayo umatshini wokuncamathelisa kwikona
Lo matshini usetyenziselwa ubukhulu becala ukubekwa kwekona ngokuzenzekelayo. Isetyenziswa ikakhulu kwiibhokisi zefowuni eziphathwayo, iibhokisi zezipho, iibhokisi zezacholo, iibhokisi zezambatho, iibhokisi zezihlangu, iibhokisi zokuthambisa kunye nezinye iibhokisi. Inkqubo epheleleyo ye-servo kunye nomatshini womatshini womntu ojonga ukuchaneka, ukuphakama, ukufakwa kunye nokusebenza koyilo lomntu.
Umatshini wokuncamathelisa ngokuzenzekelayo
I-N-650A (850A) Umatshini we-aulomatic feeder gluing ngomsebenzi wephepha lokuzenzekelayo kunye nokuncamathelisa, kunye nomatshini wokushisa obushushu kunye neeyure ezingama-24.
Umatshini oqinileyo wokugoqa ibhokisi
238 uthotho oluzenzekelayo umphetho bubble cofa yinkampani yethu yokuqala kunye nemveliso yezixhobo ezintsha zokwenza ibhokisi yokufaka ibhokisi, kwisizukulwana sesibini, isenzo somatshini esipheleleyo kunye nokwenza inkangeleko ebonakalayo, uhlobo lwebhokisi yesayizi lunokusetyenziswa kuluhlu olubanzi.